bhimphoto: August 2008
गत सोमबार दिउँसो सप्तकोशीले पूर्वी तटबन्ध भत्कायो । पानीको भेल पश्चिम कुसाहा-४ भएर टप्पु जाने बाटो हुँदै बग्न थाल्यो । घटनाको एक साता भयो । करीव १० हजार विस्थापितहरु इनरुवा र आसपासका विद्यालयमा शरण लिएर बसेका छन् । श्रीपुर, हरिपुर र पश्चिम कुसाहा गाविस अझै जलमग्न छन् । राजमार्ग खुल्ने छाँट छैन । अप्टिकल फाइवर बगाएकाले टेलिकमको मोवाइल पनि प्रभावित भएको छ ।
मेरो दैनिकी त्यतै व्यस्त रह्यो । मलाइ अझै फुर्सदले बसेर ब्लगमा लेख्ने समय जुटिरहेको छैन ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:14 PM No comments:
माओवादी जनयुद्धसँगै जनता परिचित भएको दुर्घटनामध्येको सबैभन्दा नमिठो 'हत्या' भन्ने मलाइ लाग्छ । त्योताका नौलो थिएन । संविधानसभापछि आस गरेजस्तो शान्ति छँदै छैन । हिजो विहान युवा दिवसका अवसरमा जुलुस निकाल्ने तयारीमा रहेका भाइहरुले जुट मिल गेटमा आउन फोन गरे ।
त्यहाँ उनीहरुले सहभागिता जुटाउन सकेनन् । ९/१० जनाले ठूलो ब्यानर बोकेर निस्किए । युवा मंत्रालय गठन लगायतका मागमा हस्ताक्षर पनि संकलन गरे । फिर्ने बेलामा रानी भंसार जाँदै गरेका दुइजना ट्राफिक प्रहरी भेटिए । उनीहरुले एकै स्वरमा भने 'पत्रकारजी त्यो शुक्रवारे हाटनेरको नहरमा जानुस, लास छ , धेरै मान्छे भीड छन् ।
ढिलो नगरी विराटनगर-१६ मा पर्ने तेलिया पोखरीबाट केही पश्चिम , त्यहाँ पुग्दा धेरैले नाक थुनेर कुनै कुरा हेरिरहेका थिए । लास रहेछ । जीउ बोरामा , कम्मर मुनिको भाग पैनीको डिलमा । असामयिक मृत्यु भएकाहरुको अस्पतालले पोष्टमार्टमपछि बुझाउने शवजस्तै कम्मरमाथिको भाग बोरामा थियो । सशस्त्र प्रहरीका एक जना सइले भने 'हामीले यो जीउचाहि पानीबाट झिक्न लगाएको हो ।' उनका अनुसार सड्न थालेको दुर्गन्धले थाहा पाउनेबाट प्रहरीमा सूचना पुगेको थियो । त्यहाँ खटिएका इप्रका रानीका सइ बमबहादुर कोइरालाका अनुसार प्रहरीमा कुनै पप्पु यादव भन्ने मान्छेले फोन गरेर यहाँ गन्हाएको खबर दिएको थियो ।
मेलाजस्तै हेर्न भेला भएकाहरु नाकमा रुमाल राखेर नियाल्दै थिए । कान्छी लेखिएको चामल प्याकिङमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकको बोराको पुछारबाट आन्द्राभुँडी निस्किरहेको थियो । मुचुल्का तयार गर्दै रहेका प्रहरीले अनुहार हेर्न सजिलो हुनेगरि लठ्ठीले हटाए । अनुहार सुन्निएको थियो । एउटा हात बाहिर देखिएकाले त्यो पानीभित्र रहेछ भन्ने सेतो चाउरिएको देखेर भन्न सकिन्थ्यो । एउटा आँखिभौंमा चोट थियो । १० मिनेट बित्यो । म त्यहाँबाट निस्किए ।
पछि डिएस्पी विद्यानन्द माझीलाई फोन गर्दा पहिचान खुलेको थाहा भयो ।
उनी १५ न. वडाको पिचरा घर भएका १५ वर्षका शम्भु सहनी रहेछन् । बजारस्थित सरस्वती माविमा ८ कक्षामा पढ्ने बिद्यार्थी रहेछन । उनी गत आइतवारदेखि वेपत्ता थिए । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमानमा उनको हत्यापछि छ्याक छ्याक पारेर कम्मरमा काटेर जीउ दुइ टुक्रा बनाइएको थियो ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 11:10 AM 1 comment:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 9:07 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 8:46 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:16 PM No comments:
विराटनगरमा बुधवार साँझ एउटा पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्ना कुरा राख्दै तेह्रथुमको जिरीखिम्ती-६ का दुर्गा भट्टराइ । साथमा उनी छोरी अनिता ।
दुर्गाप्रसादका अनुसार महिनावारी रोकिने समस्या रहेकी अनितालाइ धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जँचाउदा डाक्टरहरुले आन्द्रा बटारिएकाले तुरुन्त अपरेशन गर्न सल्लाह दिए । अपरेशन भयो । डाक्टरले बताए आन्द्रा ठीकै रहेछ , समस्या पाठेघरको थियो । सो फालियो । अब नानी हुँदैन ।
भर्खर विवाह भएकी २२ वर्षीया अनिताका श्रीमानले लगतै दोस्रो विहे गरे । सौता हालिएपछि छोरीलाइ विराटनगर ल्याएर दुर्गाप्रसादले पुनः जँचाए । पाठेघर ठीकै रहेको र दाँया मृगौला अल्ट्रासाउण्डले नदेखाएको रिपोर्ट दियो । अब उनीहरु त्यो अप्रेशन अघिको पुर्जी देखाउँदै भनिरहेछन् 'पहिलेको रिपोर्टले मृगौला देखाउँछ, पछिकोले देखाउँदैन । कसको दोष ?' भनिरहेका छन् ।
वीपी प्रतिष्ठान गल्ति मान्न तयार छैन । पीडित नियाउरो मुख लाएर अब कहाँ जाने भन्नेमा छन् ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 2:22 PM No comments:
पाल्नुस् पाल्नुस् देशको दोस्रो ठूलो शहर विराटनगर
नेपालको औद्योगिक राजधानी भनाइएको शहर
केशलिया र सिंघिया खोला यसको पूर्व पश्चिम सीमा छ
उत्तरमा टंकिसिनुवारी, भारतको जोगबनी दक्षिणमा छ
यो छ रानी भेटिएको कुनै रानी
सीमा क्षेत्र छ तस्करीको छ तानातानी
प्रजातन्त्रको प्रथम बिगुल फुकिएको ठाउँ
तर अहिले बन्द मिलहरु रहेको बूढो गाउँ
यो जतुवा आंगनभरि कुनै कुवा
अचेल मधेस आन्दोलनको अगुवा
यो मधुमारा नेता बस्छन् सारा
तैपनि लिनुपर्छ सिफारिसको सहारा
यो चा"दी चौक बरगाछीको छिमेकी
हिंडदैछ खोज्दै चाँदनी लहुरो टेकी टेकी
यो बरगाछी गाछी छैन नाउँ राखे के हुन्छ
क्या थियो छहारी सडको वारिपारी सम्झदै रुन्छ
यो कञ्चनवारी जहाँ थियो केराघारी आँपको बाडी
अब छ त्यहाँ बाडीको सट्टा सडकभरि गाडी नै गाडी
यो पोखरिया कार्यालय जंगलको छ
पोखर त छैन कुनै राजनीतिको दंगल छ
यो तीनपैनीमा तीन होइन तेरह पैनी छ
चिया पसल छ बिंडी जर्दा खैनी छ
यो शंकरपुर छ यहा सोमबारे हाट छ
हाटका दिन पसलेहरु को ढाट छ
यो रंगेली रोडमा डाक्टर छन् असल असल
सिनेमा थियो जलजला बन्द भयो, औषधि फर्निचरका पसल
नगरको पूर्वी भागमा यो छ हाटखोला
हरियाली पार्क छ, कारागार छ, धान पाटाका गोला
यो तीनटोलियामा तीन होइन तेरह टोल छ
यो धर्मबाँध सबै जातजातिको फूलबारी छ
सीमासँग छ जोडिएको खुलेआम वरिपरी छ
यो सरौंचिया टोलमा श्रमिकहरुको निवास छ
मुस्लिमहरुको पूजाथलो मस्जिद खास छ
शान्ति चोकमा शान्तिको न देखिने घर छ
रात पर्दा अलिक चकचके चोरको डर छ
पुरानो खदराटोलमा खदरा पूरै मासिएको
गायत्री पाठशाला छ सुनौलो मन्दिर छ सरस्वतीको
विचारका अवैध कारोबारियालाई
पेशाको मर्यादा जलाउनेलाई
चाकरीको मादल बजाउनेलाई
भ्रमको खेती कमाउनेलाई
अरुको काँध समाउनेलाई
गन्ध पाउदै गन्हाउनेलाई
कोइली स्वयंले आफूबीच पसेको
कागलाई धपाउन पाए
तर लेख्नु पर्छछ यो क्षोभले
गर्दैन आँट गर्नु पर्नेले
लक्ष्मण नेवटिया, विराटनगर-१२
महँगीले डाडा काट्यो, काल भो जिन्दगी
जताततै लथालिङ्ग, बेहाल भो जिन्दगी
गाँस, बास, कपासको समस्याले सताउदा
पार पाउनै नसकिने, जाल भो जिन्दगी
उन्नति र प्रगतिका बाटाहरु नभेटिंदा
जुवा खेल्ने जुवाडेको खाल भो जिन्दगी
आईए, बीए, एमए पढ्यो जागिर केही पाइदैन
बामे र्सर्ने कछुवाको चाल भो जिन्दगी
सपना त धेरै थिए, हुरी आइ उडाइदिदा
प्वालैप्वालमा च्यातिएको पाल भो जिन्दगी ।।
माधव दाहाल 'मणि'
आर्थिक वर्षवित्ने तरखरमा थियो । सालतमामीले कर्मचारीहरु भ्याइनभ्याई थिए । नया" आर्थिक वर्षो स्वागत र पुरानोको विदाइका गफहरुले कार्यालयमा चर्चा पाइरहन्थ्यो । अब त नया आर्थिक वर्षसुरु हुन मात्र हप्तादिन बाकी हुदो हो । अचानक कार्यालय सहयोगीले नया र्टाई लगाएर आएपछि कार्यालयमा तुरुन्तै खासखुस सुरु भइहाल्यो- 'उसले र्टाई त्यो पनि नया †' त्यो कुरो सेलाउन नपाउदै खरदारले उसको र्टाईसग मिल्ने नया र्सट लगाएको देख्दा कुरो उनीतिर बढ्यो । लौ, गर्मीमा स्टोरकिपरलाई नया कोटमा देख्दा बाकी कर्मचारीहरु आर्श्चर्यचकित भए ।
झन् कोटसग ठ्याक्कै मिल्ने कपडाको पेन्टमा लेखापाललाई देख्दा कुराले अर्कै मोड लियो ।
यो कुरो अब कर्मचारीहरुमा मात्र सीमित रहेन । चचाचुमा (चम्चागिरी, चाकडी र चुक्ली) चालू एक कर्मचारीले कार्यालय सहयोगीको र्टाईदेखि लेखापालको नयाँ पेन्टसम्मको कुरा फुलबुट्टा भनेर हाकिमलाई बेलीबिस्तार लगाए । यस्तो कुरा थाहा पाउदा हाकिमलाई उठ्नसम्मको रिस उठ्यो । हाकिमले मनमनै विचार गरे अब त केही गर्नैपर्छ । त्यसपछि उनले कर्मचारीहरुलाई एकैपटक आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाए ।
लहरै लाम लागेर उभिएका ती कर्मचारहिरुको पहिरनमा हाकिमले एक नजर लगाए । आफनो नापको कपडा ती कर्मचारीहरुलाई कति पनि नसुहाए जस्तो लाग्यो हाकिमलाई । आफ्नो छवि यसरी ती कर्मचारीहरुमा र्सलक्क बा"डिएको देखेर उनी छक्क परे । सालतमामीले आफूलाई मात्र छोएको ठान्ने हाकिमलाई यो यथार्थले नछुने कुरै भएन । आफूलाई आउने उपहार, कोसेली तथा नगद बाडिदै आउँदा यति धेरै चुहावट हुदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा हाकिम बडो दुःखी भए ।
साभार : शब्दाङ्कुर, काठमाडौं
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 1:33 PM No comments:
उठ्न ढिलो भएछ । विहान करीव ६ :२० बजेको थियो । विमला (श्रीमाति)ले आतिदै उठाइन । भनिन् 'त्यहाँ कता बम पडक्यो रे, हामीले गहुँ पिसाउने मिलनेर ।' हतारिदै उठें । अनि विराटनगर-२१ को सुँडीबस्ती भनिने गल्लि पुगें । ठूलो भीड जम्मा थियो । घाइतेलाई भर्खरै अस्पताल पठाइसकेपछि प्रहरी मुचुल्का उठाउँदै थिए । त्यहाँ इप्रका रानीका इन्सपेक्टर रोशन आचार्यले बताए । चिया पसल्नीले कुचो लगाउँदा बम भेटिछन् । पड्क्यो , आमाछोरा घाइते । उनले डिब्बा देखाए । हरियो रंगको टिनको सानो डिब्बाका टुक्रा । निकै दिन भएको थियो फेरि बमबारे सुन्न पर्‍यो । डिब्बामा बेरिङमा हुने फलामे गेडा, काँचका टुक्रा आदि रहेछ ।
कुचो लगाउँदा कसले यहाँ डिब्बा राखेछ भनेर पसलवाली आशादेवीले उठाउँदा हातैमा विस्फोट भएको रहेछ । आमालाई दाया हातमा गम्भिर चोट र नजिकै रहेका १४ वर्षका छोराको जीउमा र्छरा लागेछ । बम कसले किन राख्यो खुलेन । विस्फोट भएको छाप्रोमा अन्य केही क्षति थिएन । शायद क्षति हुने केही नभएर पनि होला । ठूलो भीड विभिन्न अडकलका कुरा गरिरहेको थियो ।
घटनास्थलमा भेटिएका अहिलेका माओवादी वडा नेता आइतबहादुर तामाङले भने'अस्ति नै मेरो घरमा पनि यस्तै बम पड्केको हो, जसले यहाँ छोड्यो , त्यही होला ।' भीडको अडकल अनौठा अनौठा र सम्भावनाका कुरा थिए । जहाँ विस्फोट भएको र जो घाइते भएका छन , उनीहरुबाट कसैको स्वार्थसिद्धि हुने केही थिएन । अनि मलाइ लाग्यो , राती यहाँबाट कुनै समूह कतै लागेको हुनुपर्छ । तिनीहरुले यहाँ बसेर झोला सम्याए । एउटा यहाँ खसेको होला । प्रहरीले सम्भावनाका कुरा केही गरेन ।
सीमाबाट करीव एककिलोमिटर वरको गाउँ । पारिबाट आउनेको जमात यस गल्लीमा पसे कसैले खोज्दैन । सम्भावनाका कुरा धेरै हुनसक्लान । घाइते नभेटेपछि म त्यहाँ १० मिनेटभन्दा बढि बसिन । फिर्दा फिर्दै मैले रेडियोको न्युजरुममा फोन गरें । विहान ६:३० को समाचार जारी रहेछ । मोवाइलबाट टिपाएर घर पुग्दा पुग्दै सुन्न पाइयो । आएर टेलिभिजनलाई पनि फोन गरें । उताबाट उतर आयो 'ए के टिपाउनु हुन्छ, मेल हालिदनुस् ।' म शायद त्यसै गर्थे तर, घरको पीटू कम्प्युटर बिग्रिएर थन्किएको छ महिना भएको छ । टेबुलमा मोनिटरमात्र मलाइ जिस्क्याउन बसेको छ । अर्को सीपीयु ल्याउन सुकोले साइत जुराएको छैन । जे होस कराएरै भएपनि टेलिभिजनका साथीलाई रिडर हाल्नोस् भन्दै टिपाए । सात बजेको बुलेटिन हेरें । त्यो समाचार परेजस्तो लागेन । नित्यकर्म लगतै म अस्पताल हान्निएँ । कोशीअञ्चल अस्पतालले धरानको वीपी लानु भनेकाले घाइते गइसकेको जानकारी त्यहाँको प्रहरी बिटका जवानहरुले दिए । घाइते भेटिएन ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:13 PM No comments: